Mad'habta katoliga oo dooratey baaderi cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mad'habta katoliga oo dooratey baaderi cusub
La daabacay torsdag 14 mars 2013 kl 14.47
Dalka Vatikanka oo ah qayb yar oo kamid ah magaalada Rome ee carigaas Talyaaniga ayaa shaley waxaa lagu doortey baaderiga hoomin doona mad'habta katolikada. Baaderiga cusub Fransiskus ayaa ka soo jeeda Latinamerika gaar ahaan dalka Argentina.
Tirada dadka heysta ama aaminsan dalkaan Iswedhen mad'habta katolikada ayaa laug sheegaa in ay ku dhowyahiin 100 000 tiradooda. Anders Arborelius oo wadaad ka ah kaniisada kotolikada magalada Stockholm ayaa aaminsan in ay doorashada baaderigaan ka soojeeda Latinamerika wax badan ugu fadhido.
- Qaar badan dadka waxay dib u xuusin u noqoneysaa diinta ay wadankooda kalo yemaadeen. Marka waxaa laga yaabaa doorashadiisa in ay dhiro gelin u noqoto, ayuu yeri Anders Arborelius.